Bitcoin ku iibso Kaarka Hadiyadda Netflix | Paxful
Ku iibso Bitcoin (BTC) lacagta Kaarka Hadiyadda Netflix
Paxful waxay kaaga dhigaysaa mid fudud oo ammaan ah in aad gadato aadna haysato lacagaha elektoroonigga ah. Hoos ka hel yabooha ugu wanaagsan kuna iibso lacagaha elektoroonigga ah Kaarka Hadiyadda Netflix maanta.
Sida Looga iibsado Bitcoin barta Paxful
Halkaan Paxful, yoolkeenu waa inaan adeegyada dhaqaalaha u furno malaayiin dad ah oo daafaha caalamka kala jooga. Waxaan doonaynaa inaan dadka siino fursad ay ku maal gashadaan lacag mar kasta oo ay doonaan ayna si wayn kor ugu qaadaan nolol maalmeedkooda.
Aaladeena ayaa ku shaqeeya mabaadii'da dhaqaalaha dadku isdhaafsadaan, taasoo kuu sahlaysa inaad toos uga iibsato Bitcoin isticmaalayaasha kale, ayagoon ka tirsanayn bangi ama shirkado. Waxaad qayb ka noqon doontaa bulsho ka kooban sadex milyan oo isticmaale, dhammaantoodna ay noola yimaadeen yoolka helitaanka maamulka dhaqaalahooda.
Inaad lacag oonleen ah ka iibsato Paxful waa wax fudud: Keliya raac talaabooyinkaan:
Isdiiwaan geli – Ciwaan furo kadibna waxaad si ootomaatig ah u helaysaa kaydka bilaashka ah ee Bitcoin.
Hel yabooh – Markaad furato ciwaan, dooro qaabka lacag bixinta, cadadka Bitcoin ka aad doonayso inaad iibsato nooca lacagtaada, kadibna guji Raadi Yaboohyo. Ka raadi liiska yaboohyada la heli karo, dooro midka sida ugu haboon u waafaqaaya shuruudahaaga, kadibna akhri shuruudaha iibiyaha.
Biloow ganacsiga – Haddii aad ku qanacdo shuruudaha iibiyaha, geli cadadka Bitcoin ka aad doonayso inaad gadato, kadibna biloow ganacsiga. Tani waxay furaysaa wada sheekaysi layf aad ula galayso iibiyaha. Raac tilmaamaha iibiyaha si aad lacagta u bixiso kadibna xaqiiji lacag bixinta.
Hel Bitcoin – Iibiyaha ayaa fasixi doona Bitcoin ka oo toos u galaysa kaydkaaga Paxful.
Waxaad sidoo kale daawan kartaa muuqaalkeena faahfaahsan si aad u fahanto sida Bitcoin si dhakhso ah loogu iibsado.
Kadib markaad ganacsi si guul leh u samayso, waxaad u diri kartaa ama ku isticmaali kartaa Bitcoin kaaga kayd kale ama adeeg adoo toos uga bixinaaya kaydkaaga Paxful.
Adoo haysta in ka badan 300 oo qaababka lacag lagu bixiyo ah, gadashada oonleenka ah ee Bitcoin ayaan marna fududayn. Laga bilaabo kaaska iyo lacagaha baanka lagu diro ilaa kaararka hadiyada iyo ablikeeshinada lacag bixinta, Waxaad xulan kartaa dookha kuugu haboon adigga. Haddii aad rabto dookh lacag bixin oo aadan u jeedin, noo sheeg waxaana ka shaqayn doonaa inay suuragasho.
Ku ganacso si dhakhso ah, badbaado leh, oo amaan ah adoo adeegsanaaya suuqa isdhaafsiga macaamiisha ee Paxful. Maanta biloow!